#Klopp oo qiimeeyay Liverpool: Waxyaabo badan way saxan yihiin, qolal badan oo hagaajis uu bahana waay jiraan
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa raadinaya iney kooxdiisa ay ka wanagsanaato Arsenal, isagoo aaminsan in kooxdiisu miiska soo saartay inay ilaa haatan yihiin "koox ficaan".
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 23, 2019
Jurgen Klopp ayaa ku tilmaamay bilowga Liverpool ee bilowgooda xilli ciyaareedkii “ilaa hada, waa hagaag”, iyadoo kooxda hogaanka u heysa ee “Reds” ay isku diyaarineyso inay ku soo dhoweyso Arsenal Anfield.
Kooxda heysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool ayaa hogaamineysa Premier League ka dib labo kulan, iyagoo 4-1 ku garaacay Norwich City ka dib guushii ay ka gaareen Southampton isbuucii hore 2-1.
Kooxda Klopp ayaa sidoo kale rigoorayaal lagaga badiyey ciyaarta”Community Shield” Manchester City dhanka kale waxaana ay ku garaaceen Chelsea finalka UEFA Super Cup isla habkaas.
Marxaladi hore ee xilli ciyaareedka, Tababaraha Reds wuxuu arkay rajo wanaagsan laakiin wuxuu ogyahay inay jiraan meelo ubaahan horumar, iyadoo Arsenal – ay sidoo kale ku guuleysatey labo guul oo labo kalena ay uu harsan tahay.
“Qeybo ka mid ah [bilowga xilli ciyaareedka] runtii aad ayaan ugu faraxsanahay,” ayuu ku yiri shirkiisa jaraa’id. “Waxay la mid tahay bilowgii xilli ciyaareedkii hore, markii aan helnay natiijooyin xasaasi ah laakiin dadka ayaa i weydiiyay wax qabadkooda.
“Si aad talaabada xigta u sameyso, waa inaad marka hore gaartaa heerka sanadkii hore, heerkii ugu dambeeyay ee aad aheyd markii hore. Taasi waa waxa aan isku dayeynay inaan sameyno, laakiin taasi micnaheedu maahan ka dib fasaxii xagaaga waa in aan isla markiiba sidaan oo kale aan sameyno.
“Waan ognahay inaan horumarin karno, laakiin maahan inaan kaamil ahaansho bilowga xilli ciyaareedka, waa inaan diyaar ahaano, diyaarna waan nahay. Hada waxaan ka shaqeyneynaa inaan fiicnaano. Waligeen ma gaari karno, laakiin waan shaqeynaa oo isku dayeynaa.
Marka laga soo tago City, qeybtii labaad aad bey fiicneyd. Marka loo fiiriyo Norwich, 60 daqiiqo runtii waa fiicnaayeen markaas sida iska cad ma ogin wax intaa ka badan oo sida loo xakameeyo ciyaar. Taasi ma aheyn mid qumman, run ahaantii.
#Ashley Williams ayaa ku tagey kooxda Bristol City heshiis…
#Jürgen Klopp ayaa doonaya in Liverpool ay sii ahaato mid…
“Kadib waxaan la ciyaarnay Chelsea, duruufo adag laakiin waxaan badinay ciyaarta.
“Ka dib isbuucii hore, Southampton waxa ay aheyd mid ka mid ah kulamadii ugu adkaa ee aan ilaa iyo haatan la ciyaarney. Ciyaarta kaliya ee aan xasuusan karo ee la mid ah waa markii aan ka soo noqoney Spain ciyaartii horyaalka yurub taa ka dibna aan la ciyaarnay Swansea. Waan jeclahay kulankaas sidoo kale oo xasuus gaar ah ayuu ileeyahay.
“Southampton waxay heshay fursado laakiin taasi waa kubada cagtaoo isku haleyn ma leh. Uma ciyaarno ciyaar mana u maleynayno inaan loo ogolaan inay mucaaradku ka toogtaan bartilmaameedkayaga, taasi maahan sida wax loo difaaco shaqooyinka. Taasi waa waxa aad adigu goolhaye ahaan aad ledahay.
Waxa jira waxyaabo badan oo wanaagsan, laakiin meelo badan oo in la hagajiyo u bahan ayaa jiraa sidoo kale, waa ciyaar koox wadajirta ah, waana inaad shaqaysaa. Markaa aan ciyaarno kubbadda cagta hadda.
Ilaa hadda wax jira ma jiro aan ilaa hadda aan ka war sugno Arsenal.”
Suuqa kala iibsiga horyaalka ingiriska ayaa xirmay iyada oo aan Liverpool aysan jeebka gacanta aysan galin, laakiin weli waa ay lumin karaan Dejan Lovren, oo lala xiriirinayo kooxda AS Roma.
Klopp ayaa sheegay “in ay la yaab ku noqotey” wax war ah uusan ka haynin Lovren, isagoo raaciyay markii mar kale gadaal laga waydiyey oo lagu celiyey su’aasha: waxaa uu yirii waa “isku day wanaagsan.
Isaga oo ka hadlayey kala duwanaanshaha ee suuqa kala iibsiga, Klopp wuxuu yiri: “Waxba igama gelin marka uu xirmayo, laakiin waa inay isku waqti isku xirnaataa. Taasi waa fikradda meesha ugu horeysa.
“Waxay ka hadlayeen dhameystirka ka hor inta uusan bilaaban xilli ciyaareedku – fikrad fiican – laakiin England kaliya ayaa taas sameysay. Taasi macno weyn ma sameyneyso.”
44 mins ago 24,119 0